Thwebula Remote Mouse 2801 – Android – Vessoft
Ukungena kokukude, Hambayo
Thwebula Remote Mouse
Remote Mouse – a isofthiwe for the elawulwa kude computer. Isofthiwe uyakwazi belingisa ngokugcwele umsebenzi igundane kanye ikhibhodi. Remote Mouse synchronizes idivayisi computer ngokusebenzisa ezivamile Wi-Fi ukuphathwa akude. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze ngendlela ofisa ngayo sensitivity igundane ngesikhatsi kubukwa touchpad, ukubonisa entry umbhalo nesivinini ebonakalayo phezulu noma phansi. Futhi Remote Mouse kwenza ukuba bandise amathuba ngokuxhumanisa anezele ehlukahlukene.
Qedela sekulingisa of the mouse and keyboard
Amazwana on Remote Mouse:
Remote Mouse Ahlobene software:
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Isofthiwe ukucobelelana imiyalezo futhi wenze ucingo noma amakholi wevidiyo. Isicelo kwenza ukuxhumana in izingxoxo neqembu kanye ukubuka ulwazi mayelana nezinye abasebenzisi.
Hambayo Ithuluzi Functional ukuphatha okuqukethwe idivayisi kanye thwebula izicelo Mobogenie service. Isofthiwe ikuvumela ukuba enze isipele.
English, Français, Español, Português... Teamviewer 12.0.6033
English, Українська, Français, Español... PlayStation 2.55.8
Imidlalo Ukungena kokukude Isofthiwe for the elawulwa kude imisebenzi inethiwekhi ye console game. Isofthiwe kwenza ukuxhumana bosizo bese ulandela izindaba zomhlaba game.
Downloaders Functional thwebula umphathi isiphequluli esakhelwe. Isofthiwe umsebenzi sime futhi baqale thwebula ifayela.
Office Omunye software ethandwa kakhulu ukudala bese uhlela amaphepha. Isofthiwe isekela imisebenzi eminingi ehlukene kanye has a elula management uhlelo aguqulelwe Amadivayisi Android.
Amafayela Isicelo isipele Amatebhe. Isofthiwe kwenza ukususa noma ukubuyisela idatha ye izinhlobo ezahlukene kanye relocates amafayela kuma imemori khadi.
English, Українська, Français, Español... Backgrounds HD 4.3.54
Ubuso bekhompyutha Isofthiwe inhlanganisela yezimpawu enkulu wallpapers of izinhlobo ezahlukene nosayizi. Isofthiwe isekela search iphepha by Isilinganiselwa zabanye abasebenzisi kanye azisa izithombe entsha.
English, Українська, Français, Español... Instagram 9.7
Inethiwekhi Yokuxhumana Isithombe Isofthiwe ukuhlala kwelinye avakashelwa zokuxhumana nabantu emhlabeni. Isicelo iqukethe eziningi imiphumela graphic nokuhlunga for umsebenzi ngempumelelo ngezithombe.
English, Français, Español, Deutsch... Documents To Go 4.002.1516
Office Isofthiwe ukudala bese uhlela amadokhumenti wombhalo, ama-spreadsheet, izethulo kanye ukuhlola amafayela PDF.
Inethiwekhi Yokuxhumana Chat Omunye izithunywa ethandwa kakhulu ukuze axhumane abasebenzisi emhlabeni jikelele. Isofthiwe isekela exchange of amafayela ezinhlobo ezahlukene kanye nokuxhumana izingxoxo neqembu.
Abadlali Media Kalula music player ngokusekelwa okuningi athandwayo. Isofthiwe iqukethe Equalizer enamandla futhi ivumela sifeze Ukucinga Okusheshayo lwamafayela omculo.
Amamephu Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe navigation esisebenza isimiso yokuxhumana ukuqapha izenzakalo umgwaqo ehlukahlukene ngesikhathi sangempela.
English, Afrikaans, Français, Español... Wikipedia 2.0
Abanye Isicelo official ukubuka encyclopedia ulwazi kunayo yonke emhlabeni. Isofthiwe kwenza ukufunda izihloko ngezilimi ezahlukene futhi sabelane ulwazi ngokusebenzisa ezinye izicelo.
English, Українська, Français, Español... Vine 5.42.1
Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukudala futhi ukubuka ividiyo iDemo amanethiwekhi omphakathi. Isofthiwe kwenza ukuba ukubhalisela ividiyo iziteshi ezahlukene, ukubuka okuphakelayo izindaba ashiye imibono kumavidiyo.
English, Français, Español, Deutsch... Bona software xaxa